Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1216
Trafikana fitaovam-piadiana : Kalachnikov 2 sy bala 178 sarona teny Tanjombato
Par Taratra sur 01/09/2016 Faits Divers, La Une, NS Malagasy
Bala an-jatony niaraka tamin’ny basy Kalachnikov roa, ary fanamiana miaramiala maromaro. Ireo no saron’ny polisin’ny Commissariat Central, Tsaralalana, tamin’ity lehilahy iray sy ny namany, teny Anosipatrana, ny zoma 26 aogosotra lasa teo. Saika halefa an-tsokosoko any amin’ny faritra atsimon’ny Nosy ireto fitaovam-piadiana mahery vaika ireto no izao sarona izao. Lehilahy iray 45 taona no […]
Kitra – «Can 2017» : andraikitra goavana ny miandry an’i Nampiandraza
Par Taratra sur 31/08/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Anisan’ireo mpitsara notendren’ny (Caf), hitsara ny fifanintsanana ho an’ny Can 2017, i Nampiandraza Hamada. Lalao hanan-danja no hotsarainy dia ny an’i Côte d’Ivoire sy Sierra-Leone. Ilay Malagasy, Nampiandraza Hamada no hitsara ny lalao hikatrohan’ny Elefantan’i Côte d’Ivoire sy Sierra-Leone, eo amin’ny andro farany amin’ny fifanintsanan’ny Can 2017. Fihaonana, hotanterahina ao amin’ny kianja Bouaké Bouaké, Abdijan […]
Dokambarotra, “pylone”, “antenne” : mahatratra hatramin’ny 3 tapitrisa Ar ny vola aloa
Par Taratra sur 31/08/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Niova avokoa ny karazan-ketra aloa amin’ny sokajina dokambarotra eto Antananarivo. Niova koa ny hetra alaina amin’ny “pylone” sy “antenne relais” Nampahafantarin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra omaly ny naoty fanazavana mikasika ny vinavina fanitsiana ny tetibola mikasika ny tahan’ny hetra amin’ireo karazana peta-drindrina mirakitra dokambarotra sy ny « antenne relai » ary ny « pylone » eto Antananarivo. Voafaritra ao anatin’ity […]
Tenisy – «Afrique U12» : mandravarava i Sampras
Niditra tamin’ny andro faharoa ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, iraisam-paritra, taranja tenisy ho an’ny sokajy U12. Fihaonana mizotra any Casablanca, Maraoka. Anisan’ireo mpilalao misongadina ilay Malagasy, Rakotondrainibe Sampras, izay mandrafitra ny ekipan’i Afrika Aostraly. Tsy mbola resy mihitsy mantsy ny tovolahy, tamin’ireo lalao nataony. Omaly, resiny tamin’ny seta 2 noho 0 (6/2 ; 7/5) […]
Afrobasket Women U18 : hiady filaharana ao amin’ny vondrona « A » i Madagasikara
Mafy ny ady. Hatramin’ny nanombohan’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika taranja basikety, sokajy U18 zazavavy, na “Afrobasket Women U18”, tany Le Caïre, Egypta (26 aogositra – 4 septambra 2016), tsy mbola nahita fandresena i Madagasikara eo amin’ny vondrona “A” misy azy. Faharesena indroa nisesy no azontsika hatreto. Ny voalohany, nanoloana an’i Angola, resy tamin’ny isa 53 […]
« Ohabolana Rakikevitra Rakipahalalana» : boky miendrika rakibolana
Par Taratra sur 31/08/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Nisy ny fanentanana ny amin’ny tokony hanangonana ireo ohabolana sy ohapitenenana vaovao na tranainy nataon’ny Akademia Malagasy nandritra ny fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny teny ibeazana. Eo ihany koa ny fanohizana ny asa efa nataon’i DI… Anisan’ny antony nandrisika an-dRabenandrasana Lalao François (Nandrasana) hamoaka tsy ho ela ny boky « Ohabolana Rakikevitra Rakipahalalana » ireo, raha […]
Korontanina ny harena an-kibon’ny tany : tsy hita izay fanavaozana ny lalàna sady tsy ilaina
Par Taratra sur 31/08/2016 Economie, NS Malagasy
Tsy hita ny vokatry ny fikoropahana ataon’ny fanjakana hanovana ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany. Terena saika holaniana teny amin’ny fivoriamben’ny Antenimiera roa tonta, ny volana mey sy jona teo, saingy tsy tanteraka. Tsy mazava rahateo ny anton’izany ankamehana izany. Teo koa ny fikasana hanova andininy vitsivitsy tao anatin’ilay tolo-dalàna vaovao, saingy tsy nampahafantarina […]
Marovoay : maizin-kitroka sy fahirano
Miaina anaty aizina tanteraka ny tampon-tanànan’ny distrikan’i Marovoay, nanomboka ny alatsinainy teo. Tratry ny fahirano koa nanomboka omaly maraina. Santionan’ny delestazy sy ny tsy fahaizan’ny fanjakana mamaha ny olana ireo, efa-taona aty aoriana, raha telo volana ny fanamby sy nofy nampanantenaina tsy tanteraka. Mipoitra tsikelikely na iniana afenina aza! Vokatry ny tsy fisian’ny […]
Tanora tsy tara – « Cités Universitaires » : fianarana mihafy koa ho an’ireo mpianatra
Mila mihafy raha te ho tafita… Niomana sy efa vonona amin’izany ireo mpianatra, indrindra ireo eny amin’ny trano natokana ho an’ny mpianatra avy lavitra. « Fiainana hafa mihitsy no hita any amin’ireny tranon’ny mpianatry ny Oniversite ireny. Olona mahay miara-monina kanefa mifandona lava, mifandefitra kanefa samy manana ny heviny, mihafy kanefa manana tanjona no hitanao eny. […]
Hotanterahina, ny zoma 2 septambra izao etsy amin’ny Alliance française (AFT) etsy Andavamamba, ny andiany faharoa amin’ny « Jazz it up !», karakarain’ny Jazz club ao amin’ity foibe ity ihany. Araka izany anarany izany, fotoana iray hanandratana ny mozika jazz io. Anisan’ny hampiavaka ity andiany faharoa ity ny fahitana fa mihatanora hatrany ireo hiaka-tsehatra, raha mitaha ny […]
Par Taratra sur 31/08/2016 NS Malagasy, NS-Politique
« Rariny ny hetsika ataon’izy ireo ary tsy manome tsiny izahay satria tsy misy mihaino izy ireo… Azo atao ny miroso amin’ny fifidianana mialoha ny fotoana, toy ny any Venezuela ohatra, nitaky izany izy ireo. Miankina amin’ny besinimaro na ny fifanarahana politika anefa izany ary dinihina eo ambony latabatra », hoy ny filoha teo aloha, Ravalomanan, omaly […]
KMF/Cnoe : “Tsy mety ny fomba fitondrana matoa miteny ny rehetra”
Mahomby amin’ny asany ve ny mpitondra? Tsy mety ny fomba fitondrana matoa miteny ny rehetra, raha ny hevitry ny KMF/Cnoe. “Tokony hanao izay faraheriny handray ireo fanairana sy sosokevitra ataon’ny rehetra ny mpitondra amin’izao fotoana izao, izay milaza fa tena voafidim-bahoaka marina: inona no hanatsarana ny fomba famindra? Tsy mety ny natao sy ny fomba […]
Efa nigadra teny Antanimora… : saron’ny polisy teny Ilanivato i Pato sy ny namany
Tsy mety fay mihitsy! Voasambotry ny polisy avy ao amin’ny poste de police Ilanivato teny Anosipatrana, ny alahady sy afakomaly i Pato sy ny namany. Araka ny fanazavan’ny polisy, raindahiny amin’ny fanaovana sinto-mahery sy fanendahana ry zalahy ireto. Lehilahy iray hody no tratran’izy ireo teo amin’ny Trano dimy eo Ilanivato. Nitondra sabatra ry zalahy nandritra […]
Ankazomborona Ambilobe : trano miisa 425 kilan’ny afo, olona 4 000 tsy manan-kialofana
Mitentina 1 miliara Ar ny tentimbidin’ny entana levon’ny afo nandritra ny haintrano tao Ankazomborona Beramanja Ambilobe, afakomaly sy omaly. Trano anjatony maro kilan’ny afo, anarivony ireo olona tsy manan-kialofana… Trano miisa 425 indray kilan’ny afo tao amin’ny fokontanin’Ankazomborona kaominin’i Beramanja Ambilobe, afakomaly tolakandro. Trano biriky ny 15 amin’ireo raha trano falafa kosa ny ambiny. […]
« Précédent 1 … 1 214 1 215 1 216 1 217 1 218 … 1 422 Suivant »